Gentoo-ရင်းမြစ် - သေခြင်းမရှိဘဲသင်၏ kernel ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ။ FromLinux | ChrisADR Linux မှ
ကောင်းပြီ၊ ဒါက Gentoo installation လမ်းညွှန်မစတင်မီငါလျစ်လျူရှုလို့မရနိုင်တဲ့အချက်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ many လူတော်တော်များများဒီ post ကိုမျှော်လင့်နေပြီးသင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါလည်းဒါကိုသေချာစွာမရှင်းပြဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Gentoo အသုံးပြုသူအဆင့်ကိုဆန့်ကျင်ခြင်း further ထပ်မံဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ၊
1 Kernel ဆိုတာဘာလဲ
2 Gentoo ကိုဘယ်လိုနေလဲ
3 ငါ code ကိုယခုဘာလဲ?
5 CLI နှင့် GUI
5.1 genkernel -xconfig အားလုံး
5.2 genkernel -qconfig အားလုံး
5.3 genkernel -nconfig အားလုံး
5.4 genkernel –menuconfig အားလုံး (ငါ့အကြိုက်ဆုံး)
6 ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လိုအရာတွေကိုရှာရမလဲ။
7.4 သင်လိုအပ်သည့်အရာများကို * နှင့်ပြုစုနေသည်ကိုကောင်းစွာစစ်ဆေးပါ။
kernel သည် Linux ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သည့်ဖြန့်ချိမှုမဆို၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိစက်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်သောပရိုဂရမ်များနှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည့်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဖန်တီးသူ Linus Torvalds သည်၎င်းကို GPL လိုင်စင်အောက်တွင်ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ GNU ပရောဂျက်သည်ယခုကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ချိရန်နှင့်မျိုးကွဲများစွာကိုခံစားနိုင်သည်။ ၎င်းကို C နှင့်ရေးထားသည်၊ များသောအားဖြင့်ဤနေရာ၌ရှိစည်းဝေးပွဲများနည်းတူယနေ့ခေတ်တွင်အကြီးမားဆုံးအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ထောင်နှင့်ချီသော developer များ၊ ဝါသနာရှင်များနှင့်ပညာရှင်များပါ ၀ င်ပြီးလိုင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာစဉ်ဆက်မပြတ်အရှိန်တိုးတက်မှုနှုန်း။ ဒီမှာ kernel ကိုတရားဝင်စာမျက်နှာ ဒါကြောင့်သူတို့ကတစ် ဦး In-depth ကြည့်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ Gentoo မှာမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း kernel ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုရင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာမြင်နိုင်ရန်ဒီမှာစာရင်းငယ်တစ်ခုချန်ထားခဲ့သည်။
gentoo-ရင်းမြစ်များ: Gentoo Linux အတွက်အထူးပြင်ဆင်ထားသည့် Kernel 4.12 ။
git- အရင်းအမြစ်များKernel သည် Linus Git repository မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်။
vanilla- သတင်းရင်းမြစ်: မည်သည့် patch မပါဘဲအပြည့်အဝ kernel ကို။
Xbox-ရင်းမြစ်: Xbox Linux အတွက် full kernel
စာရင်းအပြည့်အစုံအတွက်မင်းကိုငါထားခဲ့တာ ဝီကီလင့်ခ် Gentoo ကသူတို့ရဲ့ repositories ထဲမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ kernels အားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ် - ရင်းမြစ်များ)
ငါ code ကိုယခုဘာလဲ?
အခြား Linux package များနှင့်မတူဘဲ kernel သည် NO ဒါကိုထည့်ပြီးပြီ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ system တွင်တစ်ချိန်တည်းတွင်မျိုးစုံ kernels များရှိရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သင်တစ်ကြိမ်တည်းသာသင်အမြဲတမ်း run နိုင်သည်။ ၎င်းကိုစုစည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ပို့စ်တွင်ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ Gentoo မှာရပ်ရွာကသင့်ရဲ့အလုပ်ရဲ့ ၈၀% ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုလုပ်တော့မယ်။ 😉
ခင်ဗျားကိုသိပ်ကောင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ အဲဒါကို genkernel-next လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါကို Gentoo repositories မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာများစာရင်းကပိုကြီးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာငါ့အကြိုက်ဆုံးသောရွေးချယ်စရာများရှိပါသည်။ Gentoo တပ်ဆင်သည့်အခါအရေးကြီးဆုံးသောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည် configuration များ သင်၏ kernel ၏, ဒီအရာကသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအများဆုံးအသုံးချနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကြိုတင် compile လုပ်ထားသော kernel များရှိသည့်အပိုအလေးချိန်အားလုံးကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
CLI နှင့် GUI
သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း kernel configuration သည်နည်းလမ်းများစွာနှင့် has နေရာအားလုံးတွင်ရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်မှုများပုံ၏ဓာတ်ပုံအချို့ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
genkernel -xconfig အားလုံး
genkernel -qconfig အားလုံး
genkernel -nconfig အားလုံး
genkernel –menuconfig အားလုံး (ငါ့အကြိုက်ဆုံး)
လူတိုင်းကအခုအချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးနေကြတဲ့ပညာရှိမေးခွန်းတစ်ခု။ လိုင်းအလိုက်ရှာဖွေရန်မလိုပါက၊/ » နှင့် "? » သူတို့သည်သင်၏လုပ်ငန်းအတွက်သင်၏မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။ ဖတ်တာထက်ကြည့်တာပိုကောင်းတာကြောင့်ငါဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကိုငါပြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Processor ကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပါစို့။ kernel က Intel နဲ့ AMD နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။ ငါတို့က intel ဖြစ်တယ်။ သင်ကိုနှိပ်လျှင် ((slash) ကိုအောက်ပါ menu သို့ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
ကောင်းတယ် ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံး၊ drop-down list ရှိသည်၊ module ၏နည်းပညာအမည်၊ လမ်းကြောင်း၊ တန်ဖိုးအမျိုးအစားစသည်။ ယခုမှာမေးခွန်း ... ငါတည်နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ ဒါ့အပြင်အလွန်ရိုးရှင်း! ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုကြည့်ရင်ကွင်းအတွင်းမှာနံပါတ်တွေရှိတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကိုနှိပ်ပြီးသင်မှော်ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်မြန်တယ် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောနေရာတွင်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ... စောင့်ပါငါငါပြောခဲ့တယ် ? သူကမင်းရဲ့သူငယ်ချင်းပါ။ ကောင်းပြီ၊ နှိပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ အခုပဲ။
module တစ်ခု၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ ၎င်း၏ရွေးချယ်မှုများနှင့်မှီခိုမှုများ your အားလုံးသည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ရှိသည်။ သင်၏ရှာဖွေမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်သင်ထွက်နိုင်သည်။ အပေါ်ဆုံးဘားသည် Search (intel) လိုင်းသို့ပြန်သွားသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထပ်မံထွက်ခွာသွားလျှင်၎င်းသည်သင်ရှာဖွေမှုအသစ်ကိုစတင်နိုင်သောအဓိက menu သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်။
ယခုအချိန်တွင်သင်ဟာလုံးဝအစွမ်းထက်တယ်လို့ခံစားရပြီးပါပြီ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူအနည်းငယ်ကသူတို့ရဲ့ဘ ၀ မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး kernel တစ်ခုဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! သို့သော်ယခုမေးခွန်းပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာကိုပြုပြင်မွမ်းမံသင့်သနည်း။ ဒါကငါ့သူငယ်ချင်း၊ မင်းကိုမင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တာတစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့်မင်းကိုကူညီပေးမယ့်အကြံပြုချက်နှစ်ချက်ကိုငါပေးနိုင်ပါတယ်။
ပရိုဂရမ်အားလုံးကဲ့သို့ပင် Linux သည်ပုံမှန်ချိန်ညှိချက်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ပြုပြင်ထားသည်။ ၎င်းသည်သင်တစ်စုံတစ်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမလိုလားသော်ငြားသင်ရေးသားနေစဉ်သင့်တွင်အလုပ်လုပ်သော kernel တစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံသည်။
ဤသည်ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးစွန့်စားလျစ်လျူရှုလိမ့်မည်ဟုအရာတစ်ခုခုသည်။ ရွေးချယ်စရာများကိုလျင်မြန်စွာသွားလာနိုင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်၏စက်၏တွေးခေါ်ပုံကိုအမှန်တကယ်သိရှိလိုပါကရွေးချယ်ခြင်းတစ်ခုစီကိုဖတ်ခြင်းသည်အတွေးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်ပြောင်းလဲနေသည့်အရာများကိုအမြဲတမ်းမှတ်သားထားရန်နှင့်ရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ် browser တစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းတို့ကိုလည်းအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
driver များစွာကို default အနေဖြင့် load လုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် network card များအတွက်သာ kernel တွင်တရားဝင် driver 10 ခုရှိတယ်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းများစွာသည် 10 (သို့) ထိုထက်ပိုသောအရာများကိုစုစည်းထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းကိုသာသုံးလိမ့်မည် (Wi-Fi အတွက်အခြားသီးခြားကဏ္ section တစ်ခုရှိကြောင်းသတိပြုပါ) ။ အကယ်၍ သင်၏ kernel အလေးချိန်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချလိုပါကသင်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ဤအတွက်၊ သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်လိမ့်မည် lspci၊ lsusb၊ y Google။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့် system မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပြီးလိုအပ်တဲ့ယာဉ်မောင်းများကိုသာအလုပ်လုပ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်တော် lspci output ကိုချန်ထားခဲ့သည်။
၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်ထိန်းချုပ်မှု၊ ဝိုင်ဖိုင်ခလုတ်၊ ကျွန်ုပ်၏ SATA hard drive နှင့်ကျွန်ုပ်၏ kernel ၏အလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးသောအခြားအရာများကဲ့သို့သောအလွန်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရနိုင်သည်။
သင်လိုအပ်သည့်အရာများကို * နှင့်ပြုစုနေသည်ကိုကောင်းစွာစစ်ဆေးပါ။
ငါတို့ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် njord, ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ငါဖော်ပြရန်မေ့လျော့သောအရေးကြီးသောအချက်🙂
ထို့အပြင်၎င်းတွင် (*) တွင်ထည့်သွင်းသင့်သည့် kernel ၏အင်္ဂါရပ်များရှိပြီးအခြားသူများကို modules (M) အနေဖြင့်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးပြုစုထားတဲ့ kernel ကိုမှတ်မိနေပြီး၊ ဘဝမှာဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မှာလဲ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ root reiserfs support ကို module တစ်ခုအနေနဲ့ထားခဲ့ချင်ပါသလား။ !?! xD ...
အကယ်၍ သင်၏ kernel သည်အလုပ်လုပ်ရန်တစ်ခုခုလိုအပ်လျှင်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ module။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ kernel က startup လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ module တွေ load လုပ်တယ်။ အကယ်၍ သင်၏ kernel သည်စတင်ရန်တစ်ခုခုလိုအပ်ပါက၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစုစည်းနိုင်သည် အစား module တစ်ခုအဖြစ်၏ ... ဘယ်ပထမ ဦး ဆုံးအချက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏ «? » ငါတို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်😉
ကောင်းပြီယခုသင် kernel world သို့အနည်းငယ်ရေငုပ်ပြီးသောအခါ ~ ၂၀ ဆင့်အဆင့် Gentoo installer လမ်းညွှန်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည့်နောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခုနှင့်ငါပြီးသားပြီးပြီဟုငါထင်သည်။ သို့သော်ထိုတွင်အခြားအရာတစ်ခုကိုငါရှာလျှင်၎င်းကိုငါရှင်းပြရန်ကြိုးစားမည်။ ကိုယ့်လေထုထဲတွင်ချောင်ကြကုန်အံ့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Gentoo-sources: သေဖို့မလိုဘဲ Kernel ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ
အမြဲအဖြစ်အလွန်ကောင်းသော post ကို။
ဒီမှာကျွန်တော့်သဲတွေလည်းရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ kernel ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hardware နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် 'lspci' နှင့် 'lsusb' ကိုသတင်းအချက်အလက်၏အဓိကအရင်းအမြစ်များအဖြစ်မြင်ရမည်။ ပိုတိကျတဲ့အရာတစ်ခုခုလိုမယ်ဆိုရင်ငါဒီစာမျက်နှာကိုငါထားခဲ့ပြီ၊ ဒါကငါ့ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဒုက္ခရောက်စေခဲ့တယ် https://kmuto.jp/debian/hcl/
Juan Pablo Garcia က Rivera ဟုသူကပြောသည်
အတိအကျ njord ဆိုပါစို့၊ သင် HW ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီ post ဟာထုတ်လုပ်သူရဲ့စာမျက်နှာကိုသွားဖို့၊ kernel ကိုယ်တိုင်၏အကူအညီဖြင့်သင်အတွက်အသုံးဝင်မည့် module တွေအကြောင်းဖတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ထင်မြင်ချက်များငါ Hp Pavilion 23-p132la အတွက်အဆင့်မြင့်သော config file ကို download လုပ်နိုင်သောနေရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ blog သို့ link တစ်ခုထည့်သွင်းထားပါသည်။ ၎င်းသည်အကူအညီဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ HW ရှိအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အသုံးပြုသူများသည်ဤဖိုင်များကိုပိုမိုမျှဝေကြသည်။
Juan Pablo Garcia Rivera အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုငါချစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမှာယူထားတာငါသိတယ်။ gentoo ထဲမ ၀ င်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးတွဲတွေကိုလိုက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ website မှာဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ခုသာတောင်းပါရစေ။ ပုံများကို * .bmp တွင်မတင်ပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ဆက်သွယ်မှုသည်နှေးကွေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ browser သည်လေးလံသောပုံများဆွဲရန်အချိန်များစွာလိုအပ်သောကြောင့်ပုံများကို * .png သို့မဟုတ် * .jpg အဖြစ်ပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
အိုး။ စိတ်မကောင်း🙂ဒါပေမယ့်ထောက်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါအဲဒီအကြောင်းမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ Gentoo မှာအတွေ့အကြုံအတော်အတန်ရှိပေမယ့်ငါကဒီဘလော့ဂ်များရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကောင်းကောင်းမကျွမ်းကျင်သေးဘူး now ဒါပေမယ့်ယခုမှစ။ ငါ format ပြောင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုတိုက်ရိုက်တင်ပို့သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်၏အသင်းအတွက်အလေးချိန်အလွန်အမင်းမထည့်မိစေရန်သင့်အတွက်အလေးချိန်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။ 😉နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်သင်၏မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားစာရေးရန်ဆက်လက်အားပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်တနင်္ဂနွေလက်ဆောင်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
ငါသင်စူပါစိတ်ဝင်စားဖို့ရေးသားနေကြသည်ဆောင်းပါးများ၏စီးရီးရှာပါ။ Gentoo ကိုဝါသနာတစ်ခုအဖြစ်တပ်ဆင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းပြthousandနာပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့အမြဲတမ်းငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တာတွေကိုတကယ်မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါတောင်မှငါကြိုးစားမှုအများအပြားမှာအကောင်းဆုံးနှင့်မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုကျွမ်းကျင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ငါနေမည့်ဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည် ငါက Fedorian တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့်အခုငါ Fedora ကိုသွားနေတယ်။ ငါ Gentoo ရဲ့ mascot နဲ့တူတယ် -“ Larry the cow နည်းနည်းစိတ်ပျက်ခဲ့တယ်
လက်ရှိ Linux ဖြန့်ဝေမှုမှာ…
…ငါ Gentoo Linux ကိုမစမ်းမှီအထိပါပဲ။
ငါသည်သင်တို့၏အနာဂတ်ဆောင်းပါးများအတွက် "အကြံပေးချက်များ" ၏စုံတွဲတစ်တွဲထားခဲ့ပါလျှင်, သင်ကသူတို့ကိုအထူးသဖြင့်ထိတွေ့စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်သံသယကနေဖြစ်ပေါ်လာလျှင်:
- Gentoo မှာအတော်လေးကျယ်ပြန့်တဲ့သိုလှောင်မှုရှိသော်လည်း၊ အချို့သိပ္ပံနည်းကျအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်အခြားအလွန်တိကျသောအရာတို့ကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ repos တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာမတွေ့နိုင်သောအရာများကိုမည်သို့တပ်ဆင်နိုင်သည်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ငါ "overlays" ၏တည်ရှိမှုကောင်းကောင်းမသိရပါဘူး Debian တွင်တရားဝင်နှင့်အကြံပေးထားသည့်နည်းလမ်းများရှိသည်။ သူတို့ reposititories တွင်မရှိသောဆော့ဝဲလ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ Gentoo တွင်အလားတူတစ်ခုခုရှိသလား။ ဂန္ ./configure && make && install လုပ်ရန်မလိုဘဲမည်သည့်နေရာတွင်တပ်ဆင်မည်နည်း။
- နောက်ဆုံးတွင် Gentoo ကို install လုပ်သောအခါ၌ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာကွန်ယက်ကိုပြုပြင်မထားဘဲကျွန်ုပ် console တစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်ပထမအကြိမ် restart ပြီးနောက်။ Wi-Fi ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝနားမလည်လို့ပါ။ သင်ခန်းစာပုံစံကိုသိရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလုပ်ရန်အတိအကျခြေလှမ်းများဖြစ်ပြီး desktop နှင့်အခြား utilities များကိုဆက်လက်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ယခင်တပ်ဆင်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ Gnome နှင့်အခြေခံစနစ်တပ်ဆင်မှု၏ chroot မှအရာအားလုံးဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုလာပါ
ဘာမှမရှိ သင်နှင့် DesdeLinux တို့အားဤဆောင်းပါးအတွက်အဓိကဖြန့်ဖြူးမှုနည်းပါးသော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။
စကားမစပ်၊ ငါဟာမင်းကိုနည်းနည်းပိုပြီးနှိပ်စက်ညှင်းဆဲပြီးပြီ။ Gentoo အကြောင်းမင်းကိုအိုင်တီပညာရှင်များ၊ ပရိုဂရမ်မာများ၊ စနစ်များ (သို့) ကွန်ယက်အင်ဂျင်နီယာများရဲ့ရှုထောင့်ကနေအမြဲဖတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် distro ကိုသုံးပြီးနောက်ဆုံးအသုံးပြုသူတစ်ယောက်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ Gentoo သည်ထိုသုံးစွဲသူအတွက်အကြံဥာဏ်ကောင်းလား၊ ငါမသိဘူး၊ ဓာတ်ပုံဆရာလား၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံပညာသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုလေ့လာနေတာလား၊ သို့မဟုတ် Steam ကိုလိုချင်တာလား…? (ငါဆိုလိုတာကမင်းနားလည်တယ်ထင်တယ်)
ChrisADR ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်
ကောင်းပြီ, သင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုရေးမှတ်ထားကြပြီယခုငါနောက်ဆုံးမှာတစ်ဆင့်ချင်းစီတပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်ပြီးပါပြီ, သငျသညျအကြှနျုပျကိုစနေနေ့ (Linux Foundation ၏ LFSC) ၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စာမေးပွဲကြောင့်ငါနှင့်ပြင်ဆင်ထားရန်ရှိသည်သောကြောင့်ငါရက်အနည်းငယ်ပေးရလိမ့်မည်ကျန်ရှိသောနေ့ရက်ကာလ။ Overlays များအတွက်မူ၎င်းတို့သည် Arch ၌ရှိသော AUR ကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်။ ထိုနေရာသည်သုံးစွဲသူများကိုယ်ပိုင် ebuild ဖန်တီးနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုသည်အပြည့်အ ၀ စာပို့ရန်အတွက်စောင့်နေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပုံမှန်တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များလည်းသဲသောင်များကဲ့သို့သဲသဲကွဲကွဲများရှိနေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားပို့စ်တစ်ခုလည်းအတွက်ဖြစ်သည်။ users အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Gentoo တွင်အရာအားလုံးအနည်းငယ်ရှိပြီးလူအများအပြားရှိသည်။ gamer (ခေတ်ဟောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် 100% မဟုတ်သောကြောင့် Steam သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကကျသောနေရာတွင်ရှိသည်) Pentesting, Pentoo အတွက်ကိုယ်ပိုင် Gentoo ဆင်းသက်လာသူ Hackers များရှိသည်။ ရပ်ရွာရှိအင်ဂျင်နီယာများမဟုတ်သောအင်ဂျင်နီယာများ၊ သင်္ချာပညာရှင်များနှင့် ကောင်းပြီ, သူတို့ကောင်းကောင်း do သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များ၊ စီမံကိန်းများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာများပိုမိုများပြားလာသည်။ အတွေးအမြင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်ခွင့်ပေးသောကြောင့် Gentoo တွင်အရာအားလုံးသည်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ မင်းရဲ့သံသယကိုဖုံးကွယ်ပါ
။ ကျွန်ုပ်သည် Gentoo အသုံးပြုသူကောင်းတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ သင်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်“ သေတ္တာထဲမှ” စဉ်းစားရန်အကြိမ်များစွာသတိပြုမိလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုပါ ၀ င်လျှင်၎င်းသည်ကြီးမြတ်သည် - ကျွန်ုပ်၏ Gentoo installation လမ်းညွှန်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကြောင်းမကြာမီ out ထွက်လာပါလိမ့်မယ်
ခင်ဗျားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က…ဒီမှာ Hp Pavilion 23-p132la + AMD A10-7800 Radeon R7 အတွက်ပြင်ဆင်မှု…။
ငါလက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူး configuration ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ် ... အားလုံးအကူအညီကိုကြိုဆိုသည် ...
ကောင်းတယ် ငါကိစ္စတွင်အတွက် complete ပြည့်စုံစာအုပ်ရေးသားဖို့သာ။ ကောင်း၏ထင်ပေမယ့်အနည်းဆုံးငါသည်ဤသိချင်စိတ်ကိုနိုးထလိမ့်မည်ဟုထင်သောကြောင့်, သံသယမရှိဘဲ, ငါ့ပို့စ် 100% အတိအကျသို့မဟုတ်စုံလင်သည်မဟုတ်, သံသယမရှိဘဲ, ရပ်ရွာ၏ကျန်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေမှုအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အိမ်စာအချို့ကိုသူတို့၏အားလပ်ချိန်များတွင်ထားခဲ့ပါ။ 😉နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်ကျေးဇူးတင်စကား
Kirnel (သို့) binary kernel များရေးသားခြင်းအကြားခြားနားချက်များစွာကိုသင်သတိပြုမိပါသလား။
ဥပမာ overlay တစ်ခုတွင်ဤ ebuild ရှိသည်။
သင့်အားစိတ်ကူးအနည်းငယ်သာပေးရန် Linux From Scratch မှကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများသည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤတွင်ပြောစရာရှိသည်။
Apache ကွန်ရက်ဆာဗာကိုလည်ပတ်နိုင်အောင်လုံလောက်တဲ့စနစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားတယ်။ စုစုပေါင်း disk ကိုအာကာသအသုံးပြုမှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8 MB ။ နောက်ထပ်ချွတ်ယူခြင်းအားဖြင့်၎င်းကို ၅ MB သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောပမာဏသို့လျှော့ချနိုင်သည်။ » 
စပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုသောအခါ၎င်းတို့သည် embedded Apache server ကို 8MB သာ အသုံးပြု၍ 5MB ဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ နေရာအတော်များများသည် kernel တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်သောသို့မဟုတ်သင်၏ hardware ကိုသာအသုံးပြုသောစနစ်တစ်ခုကိုလိုချင်လျှင်။ 10M kernel ကသင့်အားကျန် RAM ကိုရရှိနိုင်ခွင့်ပြုသည် (kernel သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုသမျှကာလပတ်လုံးအလုပ်လုပ်သည်ကိုသတိရပါ) ။ စိတ်ကြိုက် kernel ရှိခြင်း၏လုံခြုံရေးနှင့်အခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများအပြင်အာကာသအတွင်းသိသာသောတိုးတက်မှုများကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဘယ်အဖြစ်ကောင်းစွာမြန်နှုန်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ငါအဆင့်3ကိုဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲသို့ကူးယူပြီး portage ကိုထပ်တူပြုပြီးပါက gentoo-source ပေါ်ထွက်လာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကနာရီပေါင်းများစွာကြာသလား။ နာရီဝက်အကြာမှာ၊
/ usr / linux / gentoo အရင်းအမြစ်များ ၄.၁၂.၁၂ / arch / arm / *
၎င်းသည်များစွာသော decompress နှင့်အတူတူပင်နာရီနှင့်နေသင့်သလားသို့မဟုတ်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသင့်ပါသလား။ ဒီပေါ်ထွက်လာကတည်းကနောက်ပိုင်းတွင်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူသူတို့ကို compile ဖို့အရင်းအမြစ်များကိုအရွက်။
ဟင်ဖာနန်၊ ကောင်းပြီ၊ ငါလက်မောင်းပရိုဆက်ဆာတပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ဘူး။ ငါနားလည်သည် RPi (သင်တစ်မျိုးအသုံးပြုလျှင်) ပေါ် မူတည်၍ USB နှင့်အင်တာနက်ဘတ်စ်ကားများသည်ချိတ်ဆက်ထားသဖြင့် download အချိန်သည်ပုံမှန်ထက်အများကြီးပိုနိုင်သည်။ (ကျွန်ုပ်၏ i7 လက်တော့ပ်ပေါ်တွင်ပင် git repository ရှိ download kernel time သည် 4-5 မိနစ်ခန့်ရှိသည်။ )
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်ဘာသာရပ်နှင့်မည်မျှရင်းနှီးသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်သင်ပိုမိုအားကောင်းသည့်လက်ပ်တော့တစ်ခုပေါ်တွင်စုဆောင်းပြီး၎င်းကိုစုဆောင်းထားပြီးသားဖြစ်သောနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပြီး၎င်းသည်အချိန်ပြissueနာကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။